Fundamentals of Marketing - PAÑÑĀ Online School
စျေးကွက်မဟာဗျူဟာနှင့် Marketing အခြေခံဘာသာရပ်ကို ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်လိုသူများ၊ ယင်းဘာသာရပ်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်လိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Membership နှင့် မဟုတ်ပဲ တစ်ဘာသာချင်းစီကိုတက်ရောက်သူဖြစ်ပါက လေ့လာကြည့်ရှူချိန်ကာလမှာ Quiz ဖြေဆိုချိန်အပါအဝင် (၂) လ ဖြစ်ပါသည်။သင်ခန်းစာ Video File များကို အစဉ်အတိုင်းလေ့လာပြီးရင် Quiz ကိုဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည် ။ Quiz ရမှတ်မှာ ၆၀ နှင့်အထက်ဆိုရင်အောင်မှတ်ဖြစ်ပြီး ၈၀ နှင့်အထက်ဆိုရင် ဂှုဏ်ထူးနှင့်အောင်မြင်သည်ဟုသတ်မှတ်သည်။အောင်မြင်ပါက ဒီ Course အတွက် Certificate ထုတ်ယူရန် Paññā Online School Facebook Page Messenger (or) 09443434463 ကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့လိုပါအပ်ပါသည်။ (ရမှတ်ပေါ်အခြေခံသော သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ် (Certificate) ကို ၁၅ဝဝ ကျပ်ဖြင့် Softcopy ကို အီမေးလ် ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Hardcopy ကို Delivery ဖြင့်လည်းကောင်း တစ်ပတ်အကြာတွင် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ (Delivery fees ကိုတော့ သင်တန်းသား ဘက်မှ ကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။)
Daw Nway Nway Soe
Founder / PR & Marketing Director of Paññā online school, Director of Business Development (AGM Travels & Tours)
Mrs. Nway Nway Soe earns her Bachelor of Arts in Economics from Chulalongkorn University of Thailand and has been learning continuously on business administration after graduation. She has spent the p... More
U Zaw Myo Tun
BSc, DMA (YIE), MBA (YIE)
Professor at The Co-operative University
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး စီးပွားရေး ဘာသာရပ်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်များကို ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် စတင်လေ့လာခဲ့ပြီး ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာနှင့် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင... More
Faculties : Daw Nway Nway Soe |;|11
Commitment : 1 Hour
This course is designed to provide the basic understanding of Marketing. It includes introduction on basic principles of marketing, marketing mix on product, price, promotion and place which are tools to deliver products or services to customers at return. Then, there will beafocus on marketing process, segmentation, targeting, differentiation and positioning. The final part of this course covers the market leadership strategy. Two cases will be used to provide more insights into marketing strategy used by successful companies.
01.What is Marketing
02. Essence Of Marketing
03. Five Core Customer & Market Place Concepts
04. Two Extremes Of Markets
05. Marketing Strategy
07. Three Principles Of Marketing
Faculties : Daw Thawdar Htwe|;|48
Commitment : 55 Mins
01. Pricing & Pricing Strategies
02. Price Analysis
03. New Product Pricing Strategies
04. Cost-Based Pricing Models
Faculties : U Zaw Myo Tun|;|13
Commitment : 75 Mins
6 Video(s),2Reading(s)
01. Creating Value for Target Customers
02. Market Targeting
03. Differentiation And Positioning
04. Analyzing The Marketing Environment
05. The Economic Environment
06. New-Product Development And Product Life-Cycle Strategies
Marketing for Web